ကင်ညာနိုင်ငံတွင် ဘတ်စ်ကားတစ်စီး မြစ်ထဲထိုးကျမှုတွင် သေဆုံးသူ ၃၂ ဦးထိ မြင့်တက် - Xinhua News Agency
ကင်ညာနိုင်ငံ Kitui ကောင်တီတွင် ဒီဇင်ဘာ ၅ ရက်က မြစ်ထဲထိုးကျသွားသော ဘတ်စ်ကားတစ်စီးကို ကယ်ဆယ်ရေးသမားများက ဆယ်ယူနေစဉ်(ဆင်ဟွာ)
နိုင်ရိုဘီ ၊ ဒီဇင်ဘာ ၇ ရက်(ဆင်ဟွာ)
ခရီးသည် ၅၀ ကျော် တင်ဆောင်လာသော ဘတ်စ်ကားတစ်စီးသည် ကင်ညာနိုင်ငံ အရှေ့ပိုင်း Kitui ကောင်တီအတွင်း ကျေးရွာတစ်ရွာရှိ Enziu မြစ်ထဲသို့ ဒီဇင်ဘာ ၄ ရက်က ထိုးကျသွားခဲ့ပြီးနောက် သေဆုံးသူ အရေအတွက်သည် ဒီဇင်ဘာ ၆ ရက်တွင် ၃၂ ဦးထိ မြင့်တက်သွားပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ကယ်ဆယ်ရေးဆောင်ရွက်နေစဉ်အတွင်း မြစ်ထဲထိုးကျသွားသော ဘတ်စ်ကားအတွင်းမှ ပိတ်မိနေသူ ၁၇ ဦးကို ရေငုပ်သမားများက ကယ်တင်နိုင်ခဲ့ကြောင်း Mwingi အရှေ့ပိုင်းကောင်တီ(ခွဲ)မှ တပ်မှူး Joseph Yakan က ပြောကြားခဲ့သည်။
“သေဆုံးသူတွေရဲ့ ရုပ်အလောင်းအချို့ကို တနင်္ဂနွေနေ့က မြစ်ထဲကနေ ထပ်မံဆယ်ယူရရှိခဲ့တဲ့အတွက် သေဆုံးသူစုစုပေါင်း ၃၂ ဦးထိ ရောက်ရှိသွားပါပြီ” ဟု Yakan က တယ်လီဖုန်းဖြင့် ဖြေကြားခဲ့ပြီး ကယ်ဆယ်ရေးသမားများသည် Enziu မြစ်ထဲပြုတ်ကျသွားသော ဘတ်စ်ကားကို ကုန်းပေါ်သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိရန် ဆယ်ယူမှုလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်းလည်း ၎င်းက ဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်။
ဘတ်စ်ကားယာဉ်မောင်းသည် တံတားပေါ်ထိ မြစ်ရေလျှံနေသော မြစ်ကူးတံတားကြီးအား ဖြတ်ကျော်မောင်းနှင်ရန် ကြိုးပမ်းနေစဉ် ၎င်း၏ဘတ်စ်ကားသည် ရေစီးခပ်ကြမ်းကြမ်းဖြင့် ရိုက်ခတ်ခံရခြင်းနှင့်အတူ မြစ်ထဲသို့ မျောပါတိမ်းမှောက် သွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း Yakan ၏ ပြောကြားချက်အရ သိရသည်။
Kitui ကောင်တီအုပ်ချုပ်ရေးမှူး Charity Ngilu က ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးနေကြောင်း သိရသည်။
“ မြစ်ထဲမှာ ရုပ်အလောင်းတွေ လုံးဝ ကျန်ရစ်မနေခဲ့ရလေအောင် ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ငန်းတွေကို တနင်္လာနေ့မှာလည်း ဆက်ပြီးလုပ်ဆောင်နေပါတယ် ” ဟု Ngilu က ဆိုသည်။ ထို့ပြင် သေဆုံးသူများအနက် ၁၅ ဦးသည် မိသားစုဝင်တစ်ခုတည်းမှဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့သည် အသက် ၇၀ ကျော် အရွယ်ရှိ သက်ကြီးစုံတွဲတစ်တွဲ၏ မင်္ဂလာပွဲတစ်ခုသို့ သွားရောက်စဉ် ယခုကဲ့သို့ ကားမတော်တဆမှုဖြင့်ကြုံတွေ့ခဲ့ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက မှတ်ချက်ပြုပြောကြားခဲ့သည်။
ယခုမတော်တဆမှုအတွင်း လူ့အသက်ပေါင်းများစွာ ဆုံးရှုံးခဲ့ရကြောင်း နှင့် Enziu မြစ်ထဲသို့ ဘတ်စ်ကား ထိုးကျသွားချိန်တွင် ယင်းဘတ်စ်ကားပေါ်၌ ခရီးသည်မည်မျှ လိုက်ပါလာသည်ကို အတိအကျမသိရကြောင်း ၎င်းကဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်။ (Xinhua)
Death toll from Kenya’s river bus accident rises to 32
NAIROBI, Dec.6(Xinhua) — The death toll from Saturday’s river bus accident rose to 32 on Monday after the bus with about 50 passengers plunged into River Enziu atavillage in Kitui County, eastern part of the country on Saturday.
“Some bodies were retrieved from the river on Sunday bringing the total number to 32,” Yakan said on phone, adding that the rescuers managed to retrieve the bus wreckage to the shores of River Enziu.
According to Yakan, the driver of the bus was attempting to drive pastaflooded bridge when water tides overpowered the vehicle, sweeping it into the river.
Kitui Governor Charity Ngilu was coordinating the recovery efforts.
“Recovery efforts continue Monday to ensure no bodies are left behind trapped at the river bed,” Ngilu said, noting that 15 of the dead are members of the same family who were going to attendawedding of an elderly couple aged over 70 years.
She said it was sad that many lives had been lost due to the accident, adding that it has not been established how many passengers were aboard the bus when it plunged into the Enziu River.
Photos – Rescuers retrieve the remains ofabus that plunged into River Enziu in Kitui County, Kenya, Dec. 5, 2021. (Photo by Joy Nabukewa/Xinhua)